News and activities | AK Concept Shopping Mall
Adult & Baby Fashions
Uriage ရဲ့ High Season Promotion
Uriage ရဲ့ High Season Promotion လေးလာပါပြီ Uriage ချစ်သူတွေရဲ့ အသားအရေလေးကို ပူပြင်းတဲ့ နေရောင်ခြည်ဒ်နေ အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးမယ့် Bariesun Range ကို 20% Off နဲ့ March တစ်လလုံးဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ Uriage Thermal Micellar Waters Buy Any Two get thermal micellar ....
Batiste Dry Shampoo လေးတွေကို 10% 𝓞𝓯𝓯 Promotion
March လ တစ်လ်လး Batiste Dry Shampoo လေးတွေကို 10% 𝓞𝓯𝓯 Promotion နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ မနက်ခင်းတိုင်း ရဲ့ Rush Hours တွေမှာ သင့်အချိန်တွေ ကို အကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ဖို့ ခေါင်းလျော်တဲ့အချိန်ကို ခဏဖယ်ထားလို့ရနေပါပြီ စေးကပ်နေတဲ့ ဆံသားတွေ အဆီပြန်တဲ့ ဦးရေပြားအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး စတိုင်ကျလှပမှုကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ ရရှိစေမှာပါ ....
Phyto Special Discount Promotion ( the whole march)
Phyto Special Discount Promotion ( the whole march) ချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက် Phyto Hair Care Products တွေကို 70% off နဲ့ ရောင်းချပေးသွားမှာပါ ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် သဘာဝ အဆီအနှစ် တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Phyto Hair Care တွေကို 70% off ....
FILORGAရဲ့ ရင်ခုန်ဖွယ် Marchလ Promotion
ဝယ်ယူမှုတန်ဖိုး 100,000ကျပ်ဖိုး ပြည့်တာနဲ့ 50,000တန် Gift Set လက်ဆောင်ပြန်ရမယ့်FILORGAရဲ့ ရင်ခုန်ဖွယ် Marchလ Promotion FILORGA ရဲ့ ချစ်ခင်ရသူ customerများအတွက် Marchလမှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Promotionလေးတစ်ခုကို ယူဆောင်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ.. Promotionလေးကတော့ ဝယ်ယူမှုတန်ဖိုး 100,000ကျပ်ဖိုး ပြည့်တာနဲ့ ပုံထဲကအတိုင်း FILORGAရဲ့ 50,000 တန် Expert Anti-Wrinkles Heroes Gift ....
Level 2, Corner of Pyay Road & Kyunn Taw Road, 07 Quarter, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar.
© 2018-2022 AK Concept Shopping Mall @ Junction Square. All Rights Reserved. Web Design by NetScriper